OnePlus မှထုတ်ဖော်ပြသသည့် OnePlus 5T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောလူကြားခဲ့ကြပြီ OnePlus စမတ်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလ။ သင်သိသည့်အတိုင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖြန့်ချိမည် OnePlus 5။ ဒီနှစ်ဇွန်လမှာသူတို့ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ high-end ဗားရှင်းအသစ် ဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အနည်းငယ်သာသိရှိရပါပြီ။ တကယ်တော့ရက်အနည်းငယ်အကြာ တူညီတဲ့၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်.
ဒီလအကုန်ပိုင်းမှာဒီဖုန်းကိုငါတို့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ The OnePlus 5T ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုနို ၀ င်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေ high-end ဖုန်းအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်အထိထုတ်ဖော်ရမည့်အရာများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့် OnePlus ကငါတို့စောင့်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးပြီ OnePlus 5T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်.
La တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူမှုကွန်ယက်များတွင် ၄ င်း၏ဖုန်းအသစ်၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကိုဝေမျှခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာ၏ဒီဇိုင်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ဒီပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည့်အရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းအပြင် ဒီဖုန်းကနေဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲ။
အနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုနှင့် OnePlus 5T ၏အဓိကပြောင်းလဲမှုများ ၎င်း၏ယခင်ဗားရှင်းနှိုင်းယှဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ပူးပေါင်းတော့မယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပါ ဖန်သားပြင်မပါဘဲဖန်သားပြင်။ ဒီတော့ဖုန်းမှာရပါလိမ့်မယ် အချိုးအစား 18: 9: XNUMX (Galaxy S8 မှာလိုပဲ) ဤသည်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဖုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
La အသစ်မျက်နှာပြင်6လက်မဖြစ်ပါတယ်သူကအတွက်ပေမယ့် ၅.၅ လက်မဖုန်း၏တူညီသောကိုယ်ထည်။ ဒါကြောင့် screen အရွယ်အစားတိုးလာခြင်းကဖုန်းကိုပိုကြီးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစားသုံးသူများသည်အပြုသဘောဆောင်တန်ဖိုးရှိသည်။
OnePlus သည် OnePlus 5T ကိုစတင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာဖန်တီးပေးသည်။ ဒီဖုန်းအသစ်မှာဒီကျဆုံးခြင်းကကောင်းမွန်တဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းစေဖို့ကုမ္ပဏီကအလိုရှိသည်။ ဤရက်သတ္တပတ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိရလိမ့်မည်။ OnePlus ဖုန်းအသစ်အကြောင်းမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus OnePlus 5T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ဓါတ်ပုံကိုထုတ်ဝေသည်